Kara Delevin dia nanamboatra ny volony noho ny anjara asan'ny filma niaraka tamin'ny zanak'i Will Smith
Vao haingana dia nanjary fantatra fa ny modely 24 taona sady mpilalao sarimihetsika Kara Delevin dia nankatoavina ny anjara asan'ny filma "Life for a year." Ary androany ao amin'ny tambajotra dia misy sarin'i Kara, izay mijoro ho vavolombelona fa ny mpilalao sarimihetsika dia manatona ny asany ho tena zava-dehibe.
Kara Delevin nanova ny volony
Delevin dia lasa blaogy platinum
Herintaona lasa izay, nilaza i Kara ao amin'ny iray amin'ireo fanadihadiana nataony fa tia zazavavy voajanahary izy. Araka ny heviny, ny toe-pahasalaman'ny mpandidy plastika dia mila fotsiny amin'ny toe-javatra faran'izay mampihoron-koditra indrindra. Ankoatra izany, tokony hankasitraka ny endrika ivelany, izay nomena tamin'ny natiora, ary tsy hanandrana izany.
Mandritra izany fotoana izany, ny hatsarana dia hita omaly tao amin'ny orinasa namany Kendall Jenner. Nankany amin'ny iray tamin'ireo trano fialantsasatra tany Paris ny zazavavy ary na dia niezaka ny tsy hijery azy ireo aza izy ireo, dia mbola afaka naka azy ireo tamin'ny fakantsariny ireo paparazzi. Ny fisehoan'i Kendall dia tsy nahatonga ny mpaka sary ho liana, fa i Kara kosa dia tanjon'ireo fakantsary nandritra ny fotoana rehetra, raha nandeha tamina fiara izy teo am-baravaran'ny klioba. Manjaka izany fa nisaraka tamin'ny volony mahafinaritra i Delevin, izay niavonavona mandrakariva izy, nanao ny tenany ho volo ho azy. Ankoatra izany, niova ihany koa ny lokon'ny volon'ilay modely - Kara izao ankehitriny izao. Na dia teo aza izany, tsara fijery ilay modely. Nasiany volo ny endriny iray mahaliana sy malefaka, ary ny fialam-boly tao amin'ny klioba dia nanangona akanjo marevaka, misy pataloha mafy, pompier sy mainty.
Nanomboka pejy iray amin'ny tranonkala mampiaraka i Lewis Hamilton
Taorian'ny fisalasalan'i Paris Jackson, dia matahotra ny fiainany ny fianakaviana
Nanapa-kevitra ny handeha ho any amin'ny sinema i Delevin
Ankehitriny dia ao Paris ny endriky ny Fashion Week farany, saingy ny toerana misy an'i Kara ao amin'ity tanàna ity dia milaza fa tsy mandray anjara mavitrika amin'ny fandaharana ny modely. Tonga tao an-drenivohitry Frantsa fotsiny i Delevin noho ny amin'i Karl Lagerfeld, satria efa fantany hatry ny ela fa tsy ny endrik'ilay marika Chanel fotsiny ihany ny Kara, fa ny naman'ilay mpanamboatra malaza. Ary ny tsy fisian'ny fampisehoana an'i Delevin dia nohazavaina tsotra izao: nanapa-kevitra ny hanova ny asany ilay tovovavy. Tao amin'ny iray amin'ireo fanadihadiana nataony, nilaza i Kara ireto teny ireto:
"Tena te ho lasa mpilalao sarimihetsika aho. Ao amin'ny sinema no ahafahanao maneho ny tena fihetseham-po sy mampiseho fihetseham-po marina. Modely raharaham-barotra - hosoka iray mitohy. Tsy te hanao izany intsony aho. "
Kara Delevin tamin'ny fandaharana Chanel, Desambra 2016
Avy amin'ny fampahalalam-baovao fanta-daza dia nanjary fantatra fa Kara no tena nanapa-kevitra ny hanao ny asany ao amin'ny sinema. Nahavita tamim-pahombiazana ny fitsapana tao amin'ny horonan-tsary "Life for the Year" izy, izay i Jayden, zanaky ny Will Smith, 18 taona, ilay mpiara-miasa aminy. Raha ny marina, ny foto-kevitr'ilay talen'ny Mitya Okorna dia fepetra iray: i Kara dia hesorina raha tsy manova ny volony izy.
Ny sombin-dalan'ny kasety "Life for a year" dia manala ny mpijery amin'ny fifandraisan'ny tanora. Ny zaza vao 17 taona dia mianatra fa marary tsy marary ny sipany ary manasa azy hiaina ny taona lasa satria efa niaina ny fiainany manontolo izy.
Kara Delevin sy Jaden Smith
Adele dia lasa fefy tsara ho an'ny zazavavy marary mafy
Avril Lavigne sy Chad Krueger
Ozzy sy Sharon Osbourne dia nanonona ny fampakaram-bady voadona taorian'ny nanesorana ny fisarahana
Modely Emily Rataskovski dia nanafintohina ireo mpankafy ny tovovavy niova
Naomi Campbell dia nampivadika ny raharaha niaraka tamin'ilay Skotpa mpihira efa 35 taona
Mandy Moore manambady
Ny fisaraham-panambadiana Victoria Beckham sy David Beckham tamin'ny 2016?
Kate Middleton, andriana William sy Harry dia nitsidika ny Park Olympic
Mila Kunis nandany fotoana niaraka tamin'i Dimitri zanaka lahy tao amin'ny kianjan'i Hollywood
Ny Rosiana mpilalao horonantsary Maria Poroshina dia ho lasa reny tsy ho ela ... ny fahefatra!
Fiatoana tokana monja
Ny jiro manala ny varavarankely
Mpikarakara tokantrano: Irina Sheik tao amin'ny tsenan'ny toeram-pambolena
Ny famonoana ny fonon-tanana dia famantarana
Efatra feno volana isaky ny olona
Maingan-tsakafo hohanina hena soy?
Volom-bary ho an'ny fehiloha
Fenitra vita amin'ny hazo
Inona no dikan'ny nofinofy?
Krèman'ny holatra nailikilika
Trondro ao amin'ny dite
Afomanga manga avy amin'ny sable
Fambolena kôkômbinina ao amin'ny trano fonenana vita amin'ny polycarbonate - tsiambaraton'ny fijinjana voaloham-bokatra
Iza moa i Losifera?
Ahoana ny fomba hitazonana fotoana?
Kamomila tamin'ny fitondrana vohoka